Maitiro ekudzora HomeKit neNFC tag | IPhone nhau
Maitiro ekudzora HomeKit nemaNFC tag
Luis Padilla | | HomeKit, iOS 13, Zvidzidzo uye zvinyorwa
iOS 13 inotipa mikana mitsva yakawanda, uye imwe yacho iri kukwanisa kudzora zvishandiso zveKeKeKit tichishandisa maNFC tag. Izvi zvinonamira zvinogona kushandiswa kuzvinhu zvisingaperi, uye nekungounza yedu iPhone padyo navo tinogona kuwana mwenje yedu kudzima, rega mimhanzi iridze mumba medu yekutandarira kana zvese zvatinogona kufunga zvine chekuita nemadhimoni ari mumba medu.
Thanks mamwe akareruka maNFC tag, yedu iPhone uye iyo Yekushandisa mashandiro iwe unogona kuwana izvo zvandinokuratidza muvhidhiyo uye zvimwe zvakawanda. Kana iwe uchida kuwana zvakanakisa kubva kune yako iPhone uye yako HomeKit zvishongedzo, muvhidhiyo isu tinotsanangura nhanho nhanho maitiro ekugadzirisa izvi zviito.
NFC ma tag anotaridzika kunge akapora zvimiti, asi anosanganisira chip mukati inovapa iwo akasarudzika masimba. Kwenguva yakareba iyo iPhone yaisanganisira muverengi weNFC asi yakavharwa uye haigone kushandiswa kune chero chinhu kunze kweApple Pay. Kubva kuIOS 13 tinogona kushandisa iyo muverengi kuti inyatsoishandisa uye tigone kugadzira zviito zvedu pachedu pamwe neaya maNFC tag. Tinogona kutenga izvi zvimiti kuAmazon nemari shoma (link) uye isu tinazvo nemhando dzese dzekugadzira uye mavara. Ivo havafanirwe kuve nechero mhando yeakasarudzika mamiriro kuti aenderane needu iPhone. Ese maPhones kubva kuXR neXS anokwanisa kuverenga aya makadhi natively. Vakwegura mamodheru vachada kunyorera iyo inoverenga maNFC tag, senge Launch Center Pro (link).
Imwe ngatitore zvitambi, kuburikidza ne iPhone yedu uye nekushandisa «Mapfupi» Tinogona kugadzira michina yemarudzi ese yatinogona kumhanya nekuunza yedu iPhone padhuze nemategi eNFC atakagadzira. Chinodiwa chete ndechekuti yedu iPhone inofanirwa kuvhurwa, kana zvisiri, hazvizoite chero chiito. Iwo «Mapfupi» maturusi anotipa huwandu hwesarudzo, senge kugadzira mamiriro, kugadzirisa zviito zvinoenderana nezuva remwedzi kana zuva revhiki, nezvimwe. Chishandiso chine simba kwazvo chakakodzera kushandisa maminetsi mashoma kuti uone zvese izvo zvinotipa. Muvhidhiyo tinotsanangura maitiro ekuita zvese nemuenzaniso wakapusa unokutendera kuti uwane pfungwa yezvaungaite. Iwe unoda kugovana mazano ako here? Zvakanaka, mune zvakataurwa iwe unenzvimbo chaiyo yekuzviita.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 13 » Maitiro ekudzora HomeKit nemaNFC tag
Shanduro ipi? Beta kwete beta 13.2
NFC haina kuoneka muna 13.2
Pindura kuna Justan
Ini ndakagadzirisa ruzivo nemhinduro yako. Sezvineiwo chete iyo iPhone XR uye XS zvichienda mberi vanogona kuzviita natively. Yepakutanga iPhones inoda Launch Center Pro app.
Iine yazvino vhezheni yeIOS iwe kurerutsa nhanho dzekutamba pane iyo HomePod sezvo iyo HomePod inogoneswa sechishongedzo uye isingafanire kushandisa AirPlay.
Mumwe mubvunzo: chinamirwa chinoshanda kune imwe Iphone here? Semuenzaniso iyo yemukadzi wangu? Ndiri kureva kuti kana ndikarimisa kuti ribatidze mwenje mumba yekutandarira, kana mukadzi wangu akaswededza nhare yake padyo, mwenje uchabatidzawo here?
Iwe unofanirwa kugadzira imwechete otomatiki pane yako iPhone
Ndotenda zvikuru! Kwaziso
Enrique R. akadaro
Mhoroi, Kubvunza. Kana iwe ukagadzira nzira yekutsanangudza kune chinamirwa cheNFC kubva ku iPhone, unogona here kuimisikidza nekuunza iyo Apple Watch padyo? Ndatenda,
Pindura Enrique R.
Ini Juan akadaro
Old technology .. new toy ye iPhone mafeni
Pindura kuna Yo Juan
hugo rivera akadaro
Mhoroi, ndine iPhone 8 uye muchikamu che SHORTCUTS pandinoda kushandisa imwe, iyo NFC sarudzo haioneke senge inoratidzika pane yangu iPhone 11 .. ndinofanira kuishandisa here? mumwe munhu anoziva? Ndatenda
Pindura hugo rivera
Mario Kart Tour yevatambi vakawanda ichauya muna Zvita
Apple inotangisa kunyoreswa kwegore kune Apple TV + ne10 euros dhisikaundi